ဒီနေ့ဟာ အာဏာရူးတစ်စု ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတာ ၁၉၆ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။… – PVTV Myanmar
ဒီနေ့ဟာ အာဏာရူးတစ်စု ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတာ ၁၉၆ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။…
ဒီနေ့ဟာ အာဏာရူးတစ်စု ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတာ ၁၉၆ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။
Like – 3.3K Share – 202
2021-08-17 at 10:29 AM
အဏာ႐ူးမင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ လူမိစၦာအုပ္စု မုခ်က်႐ႈံရမည္
2021-08-17 at 10:30 AM
Saw Htut Kyaw says:
Minnie Lay says:
2021-08-17 at 10:33 AM
ミンカン ココ says:
2021-08-17 at 10:36 AM
198 ရက်ပါ ဗျာ . . .
ရက်ပေါင်း 200 တင်းတင်း
ပြည့်ပါပြီ . . . . . 😌
2021-08-17 at 10:38 AM
ႏွင္းဆီ နက္ says:
2021-08-17 at 10:39 AM
2021-08-17 at 10:52 AM
ပြည်သူ့အစိုးရ. အမြန်ပေါ်ပေါက်ချင်ပါပြီ NUG
Ma Mi Htay says:
အဏာရူးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ခွေးမိစ္ဆာအုပ်စုတွေ မုချကျရှုံးရမည်👎👎👎
2021-08-17 at 12:54 PM
🙏🙏🙏 အလှူခံတာပါရှင့် 🙏🙏🙏
အမေက HIV ရောဂါသည်ပါ ပုံပါဆေးကအလကားထုတ်ရတာပါ…ဖုန်းကလဲအကူအညီတောင်းပြီးအလကားငှားသုံးနေရတာပါ..ညီမတို့မိသားစုအဆင်မပြေဖြစ်နေတာက အိမ်လခလဲမပေးနိုင် ထမင်းစားဖို့တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ။တစ်နပ်စားလိုက်2ရက်3ရက်ငတ်လိုက်နဲ့😔 အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ wavemoney & kbzpay ထဲကအစွန်းထွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကျပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ 😔 လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လှူဒါန်းချင်တဲ့သူလဲအဆင်ပြေပါတယ် လိပ်စာ ဖုန်းဆက်မေးပေးပါ 🙏🙏🙏
Kbzpay Acc – 09409162252
Wavemoney Acc – 09409162252 🙏🙏🙏
2021-08-17 at 1:39 PM
2021-08-17 at 1:43 PM
စာလည်းသေချာသင်ပေးပါ သုံးလုံဂဏန်းဖြစ်တော့ မပေါင်းတတ်တော့ဘူး
2021-08-17 at 4:05 PM
2021-08-18 at 5:18 AM